The Guideline From Semalt: Nzira Yokuzvidzivirira Sei Kubhadhara Chikwereti Chakwereta
Kunyange zvazvo kuedza kwezviremera uye masangano ekudzivirira kukwereta kadhi rechikwereti nemamwe marudzi emakororo ekugadzirwa kwekambani inofanirwa zvikuru, sevashandi vekadhi rechikwereti unofanira kuziva kuti kuchengetedza kadhi rako rechikwereti rinotanga newe. Chinhu chako chinonyanya kukosha pakurwisana nemhosva iyi nderuzivo pamusoro pokuti runoitwa sei. Izvi zvinoreva kuziva nezvemhando yezvakaipa zvinoshandiswa nevatadzi uye zviratidzo zvokutarisira.
Lisa Mitchell, Mutariri Wekubudirira Kwevatereji Semalt , akafananidza mamwe mashoko anobatsira achakubatsira kugara wakachengeteka kubva pakutsotsi kadhi rechikwereti.
Kubiridzira kadhi rechikwereti kunoitwa nenzira nhatu dzinokosha:
1. Mhosva inobata kadhi rechikwereti: pickpockets uye vane ruzivo mbavha ingashandisa kuvhiringidza kubatwa kana kuti dzimwe nzira dzinopikisa kuti vane kadhi mumaoko avo - yokohama rehvide müük. Dzimwe nguva, maoko asina kururama angangosangana nekambani yakagamuchirwa. Vanogona kuitora kubva pabhokisi remashi, bin bin kana kupi zvako. Nekadhi iri mumaoko avo uye nehutano redu-ine rupo, kunyange zvisingafungidziki zvinogoneka.
2. Kadhi-kadhi yemakadhi: nemashoko echikwereti chako chekwereti, mutadzi anogona kuvhara kadhi kana kushandisa sarudzo nenzira isina kunaka. Iyo hurukuro pamusoro pekuchechedza kadhi ndeyenyaya inopisa nguva dzose apo bhizinesi rekweretheni rinokurukurwa. Vadzidzi vanoverenga uye vanonyora zvido zvekadhi rechikwereti. Kazhinji kadhi kadhi rechikwereti inoshandiswa pamashini emari uye inofambidzana nekhamera..Mune imwe nyaya maminitsi, kadhi inogona kunyorwa uye mari inotorwa.
3. Vashandi vasina ruzivo muchitoro, gesi, nzvimbo yekutoro, kana imwe nzvimbo iyo munoshandisa kadhi rako rekwereti rinogona kuverenga tsananguro yekadhi rechikwereti uye kushandisa teknolojia yekwenyuta kuti uite chekubiridzira kadhi rechikwereti.
Unoziva kuti makadhi ekubhadhara chikwereti haagoni kushandisa makadhi akabiwa nenzira iyo ichazarura nzvimbo yavo kana huzivi. Havagoni kutenga zvigadzirwa kuAmazon, somuenzaniso, uye vanozvitumira kutumirwa kumisha yavo. Mubvunzo unokosha kwazvo unomuka: vanowana sei mari chaiyo kubva pamabasa asina kukodzera?
Zvizhinji zvevashandi vemakadhi emakadhi emakadhi zvinosanganisira bato risina mhosva mukushanda kwavo kuti vawane mari yakachena. Vanogona kutumira chikwata kune chinhu chakakurumbira pane e-commerce site. Iyo mhombwe zvirokwazvo haina chaicho, asi apo munhu asina mhosva painternet shopper anozvitenga, mutadzi anopoteredza ndokutenga chinhu chimwechete kubva kune imwe nzvimbo yepaIndaneti neanotengwa CC nhamba. S / iye anobva aisa kero yemutengesi asina mhosva senzvimbo yekuendesa. Zvadaro, anoita kuti mabhuku acho atumire chigadzirwa chacho zvakananga kumutengesi, asi anowana mari uye anogona kuidhura nenzira ipi zvayo.
Chii Chaungaita Kuti Urambe Wakachengeteka Kubva Kuchengetedza Kadhi Kwereta?
Wamboribhadhara nekadhi rechikwereti muresitorendi, grocery, dentist yako, gas pompu, kana imwe nzvimbo. Zviri munyika yose inofadza kuti kushandisa kadhi rechikwereti ndeimwe yenzira dzakanakisisa dzekubhadhara. Zvisinei, pangave pane ngozi kune imwe nzvimbo nguva dzose apo kukanganisa kunoitwa apo kadhi rechikwereti rinoshandiswa, zvakadai sokukanganwa kutora risiti yekodhi yemarikiti mushure mokutengeserana, kana kana maoko asingatarisirwi achiwana kadhi.
Pano pane mamwe mazano anobatsira ekuchengetedzwa kwekuchengetedzwa kubva pakuchengeta kadhi rechikwereti:
Chengetedza ruzivo rwako paIndaneti
Rega kupa ruzivo rwekadhi rako rechikwereti
Tarisa kadhi rako rechikwereti uye zvinyorwa zvebhangi
Tsirirai kero yako yeekuda neyemari uye post office
Shred sensitive documents kuti uderedze mikana yehuwandu hwako hunoonekwa kune maziso akawanda
Nyaya inonyanya kukosha ndeyekuchengetedza ruzivo rwako paIndaneti. Iko kune mamiriyoni evanhu vanokanganisa uye vanokanganisa muwebhu vachitsvaga mari yekutengesa. Uyo waunopa ruzivo rwako rwepachena paIndaneti pane zvaunonzwisisa, asi zvakachengeteka kuedza zvakanakisisa zvako kuti usaita kudaro, kunyanya nokuda kwekadhi rako rechikwereti chekwereti.